March 2012 | မိုးသကျဦးလှငျ
Posted by မိုးသက် at 2:03 PM9comments Read more
ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီး..။ဟဲ့ အရူးရဲ့. ကူးချင်ကူးပေါ့ဟ လို့ ပြောကြမလားမသိဘူး.။ကူးချင်တာကတော့
အင်မတန် ကူးချင်တာပါ.။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ခုချိန်ထိ ရေမကူးတတ်ဘူး.။အဲဒါက ကျွန်တော် မလုပ်တတ်
သော အရာများစွာထဲက တစ်ခုပါ.။
စနူကာလည်းထိုးတတ်ရဲ့.၊ ဂိမ်းလည်းဆော့တတ်ရဲ့...။စစ်တုရင်လည်းထိုးတတ်ရဲ့.။ကျန်တဲ့ ကားမောင်းတာ၊
ဆိုင်ကယ်မောင်းတာ.တွေကအစ.၊ စာသင်တာ၊စာရေးတာနဲ့ ကုန်ကုန်ပြောရရင်.. ဟင်းတွေဘာတွေကောင်း
ကောင်းချက်တတ်တာအထိ. တော်တော်များများကို တတ်မြောက်အောင်သင်ကြားဖူးပါတယ်.။
ကို ဆရာ့ဆရာပေါင်းများစွာ ဖြင့် သင်ကြားသော်လည်း . ကျွန်တော်မောင်မိုးသက်တို့ မည်သူမှတတ်မြောက်
ပထမဆုံးသင်ပေးတဲ့ သူက ကျွန်တော့် အစ်ကိုဝမ်းကွဲဖြစ်တဲ့ မိုးကုတ်က ကို အာကာပါ.။
သူက ကျွန်တော့်ကိုရွာက ရေအင်းကြီးထဲမှာအကူးစသင်ပေးတယ်.။လူကိုတွဲပြီးခေါ်သွား..၊ပြီးတော့
လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး ခြေယက် ပါ ၊လက်ယက်ပါနဲ့..ပြော.။ ဒီက ကောင်ကတော့ တစ်ဗွမ်းဗွမ်းသာ ခတ်နေတယ်.
လူကနေရာမရွေ့ပါဘူး.။ပြောမယ်ဆိုရင် သူသင်တာက စနစ်မကျဘူးပေါ့ဗျာ..။(တကယ်တော့ ကျွန်တော်က
လည်းအသုံးမကျတာပါ.. ဟီးဟီး.).။ အဲဒါနဲ့သူက ပြောတယ်.. မင်း ရေနစ်ဖူးရင်ကူးတတ်သွားမှာပါတဲ့. ။
အဲဒီလိုပြောတဲ့နေ့ကစပြီး ကျွန်တော်သူနဲ့ ရေလိုက်မကူးတော့ဘူး.(အကူးမသင်တော့ဘူး..)။ ဘာဖြစ်လို့လဲ
ဆိုတော့ ညီအစ်ကိုချင်း လုပ်ကြံမှာစိုးလို့..။(သိတယ်မလား. စကားကပလ္လင်ခံထားတာဆိုတော့..)တစ်လ
လောက်ကြာတာ့ ကျွန်တော်က မနေနိုင်ဘူး.။ သွားစရာကလည်း အဖော်ကသူပဲရှိတော့..သူနဲ့ပဲ ကူးနေကျ
ရေအင်းကြီးကိုသွားတယ်.. ။ ရေစပ်နားမှာ ဟိုဟိုသည်သည်ဆော့နေတုန်း..အစ်ကိုက ညီလေး အဲဒီနားမှာ
ရေနောက်တယ်...။ဒီဘက်ကိုလာခဲ့တဲ့..။ ကျွန်တော်က သူ့ကိုမ ယုံဘူး.။ သူ့ပြတဲ့နားကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှ
မရောက်ဖူးဘူး.. ။ အဲဒီနားကရေကတော့ တော်တော်ကြည်ပါတယ်..။ဒါပေမယ့် အဲဒီနားကိုမသွားရဲဘူး.။
သူ ကျွန်တော့်ကိုရေနစ်အောင်လုပ်မှာစိုးလို့လေ..။ဒါပေမယ့် သူက မတ်တတ်ရပ်ပြတော့ရေကတိမ်တိမ်လေး
ဖြစ်နေတာကိုတွေ့တယ်..။ တကယ် ကျွန်တော်သွားတော့လည်းတိမ်ပါတယ်.။ တစ်ရွေ့ရွေ့နဲ့သွားနေရင်း
အစ်ကိုက ဒီကိုလာဆိုပြီး လက်ကိုအဆွဲမှာ ကျွန်တော် ချော်လဲတယ်..။ ကျွန်တော့်အစ်ကိုက ကျွန်တော့်
အောက်မှာ... ။ကျွန်တော်က သူ့ကို ဖိထားပြီး အမေရေ..၊ အဖေရေ ကယ်ပါဦး..လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ....။အရှေ့
ကျောင်းလို့ခေါ်တဲ့ ရွာအရှေ့ဖက်က ဘုန်းကြီးကျောင်းကကိုရင်ကြီးတစ်ပါးကဧကသီကိုချွတ်ပြီးသင်းပိုင်လေး
ခါးတောင်းကျိုက်လို့.. ကမ်းပါး ပေါ်ကဒိုင်ဗင်အပစ်မှာ. ရေကတိမ်တိမ်ဆိုတော့..ကိုရင်ကြီးနဖူးကွဲသွားပါရော
နောက်မှ သိရတာ ရေက ပေါင်လောက်ပဲရှိတယ်..။ ကျွန်တော်က အစ်ကို့ကို မယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်
ကိုယ့်ဖာသာ ချော်လဲပြီးနစ်တာကို..ရေအနက်ထင်နေတယ်.။ အစ်ကိုတော့အောက်မှာမရုန်းနိုင်ဘူး.။ကျွန်
တော်က သူ့ကဖိထားတာ..။အဲဒီကိုရင်ကြီးကိုတော့.. ဆေးခန်းတွေဘာတွေခေါ်ပြီး ဆေးထည့်..။အိမ်မှာဆွမ်း
ကပ်တွေဘာတွေလုပ်လိုက်ရသေးတယ်။ ကိုရင်ကြီးတော့ ဘာမှမပြောရှာပါဘူး.. ။ အဲဒီတုန်းကကျွန်တော်က
နောက်တစ်ခေါက်က .. ပိတ်ချင်းမြှောင် လှိုဏ်ဂူတော်ရှေ့က ရေကူးကန်မှာပါ..။အဲဒီတုန်းက အစ်ကိုကို
ငြိမ်းချမ်းဦး(ယခုဗကဒေါက်တာ ငြိမ်းချမ်းဦးပေါ့)သူက ကျွန်တော့်ကိုရေကန်ဘောင်ကိုကိုင်ခိုင်းပြီးခြေထောက်
ယက်ခိုင်းတယ်.။ ဟုတ်ပြီ မှန်လာပြီ..။ လက်တစ်ဖက်လွှတ်.. ။ ဟုတ်ပြီ...။လည်တော့မယ်တွေ့လား.. ။ဟုတ်
ကိုကြီး.။နောက်တစ်ဖက်လွှတ်.။ အု... ပလုတ်.. .။ ဟ.. မြုပ်သွားပြီ.. မြုပ်သွားပြီ.. ။ထို့နောက်. ...........
အဲဒီလိုနဲ့ ဒုတိယ ဆရာ ဖြစ်တဲ့နောင်တော် ကိုငြိမ်းချမ်းဦးလည်း..လက်လျှော့သွားတဲ့အခါ. ကျွန်
တော့်ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း.. ကိုယ်တိုင်ကျင့်ယူရမယ်ဆိုတာနားလည်သင့်သလောက်နားလည်လာပါတယ်..။
သွားတယ်..။ နဲနဲတိုးတက်လာတယ်ပြောရမယ်.။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ .. မကြာခဏ ရေနစ်လာတာနဲ့ အမျှ
ကျွန်တော်ရေကို မကြောက်တော့ဘူး.။နောက်ပိုင်း ဘယ်လောက်ထိ တိုးတက်လာသလဲဆိုတော့..ကျွန်တော်
ရေ ဘယ်လောက်နက်နက် ကျွန်တော် ဆင်းတယ်..။ မမြုပ်အောင် ဘယ်လို နေရမယ်ဆိုတာ သိလာတယ်.။
သို့သော် ကျွန်တော် Position ကိုရွှေ့လို့ မရဘူး..။လူကို လင်းပိုင်လိုနေတတ်လာတယ်. ။ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်
ဗထူးမှာ ကျွန်တော့်ကိုမော်လမြိုင်သားသူငယ်ချင်းတွေ ၊မွန်ပြည်နယ်ကသူငယ်ချင်းတွေဝိုင်းသင်ပေး
ကြတယ်.။ သူတို့တွေက ကျွမ်းကြတယ်.။ စစ်တက္ကသိုလ်မှာရေကူးပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ အပတ်စဉ်တစ်ခုလုံး
မှာစံချိန်တင်ထားတဲ့ ညီညီမော်ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းက..သူ့အိမ်က သံလွင်မြစ်ကမ်းဘေးမှာရှိတာ.. ။ သူကမြစ်
ကို ဆန်ကူးပြီးလေ့ကျင့်တယ်လို့ဆိုတယ်..။ရေပျော်ငါးတစ်ကောင်လို နေနိုင်တယ်.။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်က
တော့ သူသင်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေထဲမှာ ချွင်းချက်လိုဖြစ်နေတယ်.။ ရေနစ်ရင်ကူးတတ်သွားမှာပါဆိုတဲ့ အစ်ကို
ရဲ့စကားကို ပြန်သတိရတယ်.။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ရေ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ နစ်လာတဲ့အခါ ရေကိုလုံးဝ
မကြောက်တော့ဘူး.။ ဒီအတွက် အဲဒီနည်းလမ်းနဲ့လည်း. ကျွန်တော် ရေကူးတတ်မလာတော့ဘူး.။ဗထူးမှာ
တုန်းက ရေကန်ထဲကို ကျွန်တော် အရှိန် နဲ့ ဒုံးပျံလို ဆင်းပြီးဆော့ဖူးတယ်. ။ အဲဒီရေကန်က ကျွန်တော့်အရပ်
ထက် နက်ပါတယ်.။ ကျွန်တော်ရေပေါ်မှာပေါ်နေနိုင်တယ်..။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကူးခတ်ရင်.. အောက်ကို
စိုက်ဆင်းသွားတယ်..။ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာတော့ မသိဘူး.။ခြေ ၊လက်လှုပ်ရှားပုံမှားနေတယ်လို့ထင်တယ်။
အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်ဒီကိုမလာခင် ကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးဌာနက ဆရာကြီးတစ်ယောက်ကိုသင်
ခိုင်းတယ်.။ ဗိုလ်ကြီးရေကန်ထဲဆင်းကြည့်ဆိုတော့.. ကျွန်တော်က ရေအတိမ်ပိုင်းဘက် ကိုမသွားပဲနဲ့ အနက်
ပိုင်းတင် ဗွမ်းဆိုခုန်ချပြီး ပြန်ပေါ်လာတော့ ဘေးဘောင်ကိုကိုင်ထားတော့ . ဗိုလ်ကြီးက ရေကူးတတ်ရဲ့သားနဲ့
နာကိုယ်သာသိပါတယ်.။ ကျွန်တော်လည်း အကြံကုန်နေပါပြီ..။ရေမကြောက်လို့ ရေမကူးတတ်တာဆိုတော့
ရေကြောက်အောင်ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခဲဆွဲပြီး ရေထဲခုန်ချရမလိုဖြစ်နေပြန်ပါပြီ...။အခုတော့..ကျွန်တော်နွေရာ
သီကျမှ ထပ်မံကြိုးစားကြည့်ရဦးမှာပေါ့ဗျာ...။တေးထားပါတယ်...။ ဒီနှစ်နွေရာသီ .မတော်တဆ . ရေကူးတတ်
ခဲ့ရင်.. မြန်မာစကားနားမလည်တဲ့လူတွေရှိတဲ့မြစ်ကမ်းမှာ.“ ငါလိုလူ ဇမ္ဗူမှာရှိသေးရဲ့လား ကွ.... ” လို့ ကြုံးဝါး
Posted by မိုးသက် at 2:37 PM 11 comments Read more
နောက်ထပ် နဲနဲ အဆင့်မြှင့်ကြည့်ရအောင်...။ကျွန်တော် အစမ်းကဗျာတစ်ပိုဒ်ဖော်ပြထားပါ
အဲဒီကဗျာပိုဒ်မှာကြည့်ရင် ၄-၃-၂ ကာရန်ကို သွား ဆိုတဲ့၃ကာရံကနေ စထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ..။ပြောရမယ်
ဆိုရင်.. ကဗျာဆိုတာ သံကြိုးလေးတွေလိုပါပဲ..။ စလိုတဲ့နေရာကနေစနိုင်ပါတယ်.။
အောက်မှာ ရဲကမသေ ၊ နေရာမှာ ရဲကမသေ၊သေက ငရဲမလားလို့ကျွန်တော်ပါဒ တစ်ခု (နံပတ် ၃ နေ
ရာ)ကိုချန်ခဲ့ပါတယ်.။ အားလုံးသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်.။ အဲဒီလို တစ်ပါဒလေးတွေချန်ခဲ့တဲ့အတွက်
ဆိုရတာ သွက်သွားပါတယ်.။ ဥပမာ ပြရလျှင်နာမည်ကျော် ပျဉ်းမငုတ်တို ကဗျာကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်.။
ဖုထစ်ရွတ်တွ ၊ ဌက်လင်းတသို့
ပျဉ်းမငုတ်တို ၊ သက်ကြားအိုသည်
ကုန်မိုထက်တွင် ၊ တစ်ပင်တည်း ။
ခွဆုံအကွေး ၊ သစ်ခေါင်းဆွေးလည်း
အဖေးတက်လှာ ၊ အိုင်းအမာသို့
ကျယ်စွာဟက်ပက် ၊ ခြအိမ်ပျက် ။
ကုန်းမိုကမ်းပါး ၊ မြေပပ်ကြားတွင်
စစ်သားခမောက် ၊ ပိန်ခြောက်ခြောက်လည်း
စစ်ရောက်စခန်း ၊ လက်ပြညွှန်း ။
ထိုပင်ငုတ်တို ၊ ပျဉ်းမအိုသည်
စစ်ကိုလည်းကြုံ ၊ ခြအုံလည်းဖြစ်
ဓားထစ်လည်းခံ ၊ နေလျှံလည်းတိုက်
လေပြင်းခိုက်လျှက် ၊ မငိုက်ဦးခေါင်း
ရွက်ဟောင်းညှာကြွေ ၊ ရွက်သစ်ဝေ၍
လေပြည်ထဲတွင် ၊ ငယ်ရုပ်ဆင်သည်
အသင်ယောကျာင်္း ကောင်းတကား ။ ။ ။
( မင်းသုဝဏ် )
အောက်ဆုံးအပိုဒ်မှာရေးထားတဲ့.. စစ်ကိုလည်းကြုံ ၊ ခြအုံလည်းဖြစ်၊ဓားထစ်လည်းခံ၊နေလျှံလည်း
တိုက်၊ အထိ တစ်ဆက်တည်းရေးထားပြီးမှ.နေလျှံလည်းတိုက်၊လေပြင်းခိုက် လျှက် ၊ မငိုက်ဦးခေါင်းမှာ.ပြန်ဝင်
၄-၂နဲ့တစ်ဆက်တည်းရေးသွားပြီး မှ ၄-၃-၂ ထဲပြန်ဝင်သွားတာပါ.။ကဗျာရေးနည်းလေးတွေက စိတ်ဝင်
စားဖို့ကောင်းသလို အပျင်းလည်းပြေပါတယ်...။ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးတဲ့. ဆရာကြီးမောင်ထင်ရဲ့..
ငဘ ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုထဲက. ကဗျာလေးတစ်ပိုဒ်ကို ဖတ်ကြည့်ပါဦး..။
ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့ လက်ထက်က ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကဗျာတော်တော်များများမှာ ခေတ်ရဲ့နိမိတ်ပုံ
တွေထင်ဟပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်...။ရင်တွင်းခံစားချက် ရှိတဲ့အရာ ကို စကားလုံးတွေနဲ့.ဖော်ညွှန်းတဲ့အ
တတ်ပညာတစ်ခု လို့ပဲ အကြမ်းဖျဉ်းမှတ်ယူနိုင်မှာပေါ့..။ ကျန်တဲ့ကဗျာအမျိုးအစားတွေလည်း ဆက်လေ့လာ
ပေါ့ဗျာ.. ။ ဒွေးချိုး. ၊ လေးချိုးတွေကလည်းနက်နဲသလောက် ဖတ်ရတာ အင်မတန် နားဝင်ပီယံရှိပါတယ်.။
ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်မိရင်. ကာရံယူထားတာဘယ်လောက်သပ်ရပ်စနစ်ကျတယ်ဆိုတာနဲ့ အကြောင်းအရာ
အတိမ်အနက် လေးနက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကို သုံးသပ်ပြီး ကဗျာကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်မဖြစ် ကိုသုံးသပ်တာပါ.။
နောက်တစ်ခုက... ။ မော်ဒန်ကဗျာတွေပေါ့..။
ကျွန်တော်အစက မော်ဒန်ကဗျာတွေကို လက်မခံပါဘူး.။ မြန်မာကဗျာအရေးများခဲ့တဲ့သူပီပီပေါ့ဗျာ
ကာရံကိုဦးစားပေးတယ်.။ အဲဒီအစွဲတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ပေါ့.။ ဒါပေမယ့်. အဲဒီတုန်းက ကာရန်မဲ့ကဗျာတွေမှာ လွတ်
လပ်မှုရှိတယ်ဆိုတာကို သိပ်သတိမထားမိဘူး.။ စကားလုံးစီရီမှုနဲ့.. လွတ်လပ်မှုဆိုတာ..ယနေ့ခေတ်မှာ ကာရံ
မဲ့ကဗျာတွေ အားသာသွားစေတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပဲ..။ တစ်ပိုဒ်လောက် ဖတ်ကြည့်ပေါ့..။
ကစားနေကြရတဲ့ ဘောလုံးတစ်သင်း... တဲ့.။
အပေါ်က ကာရံမဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ပေါ့ဗျာ .။ သေချာကြည့်ကြည့်ရင် . ဥပမာပေးထားပုံအင်မတန်ကောင်း
တာကိုတွေ့ရမှာပါ.. ။ ဒီကဗျာက ကျွန်တော်ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး.။ မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုမှာဖတ်ဖူးတာပါ.။
ထားတဲ့အခါမှာလည်း အကုန်လုံးက အထက်ဖက်ကနေ.သော်လည်း တစ်ဖက်အသင်းက ဖိတဲ့အခါမှာ တစ်
သင်းလုံးပဲ ဆင်းပြီး ခုခံ ဖျက်ထုတ်ကြရတာကို မိသားစုဆိုတဲ့ အရာကိုတင်စားထားတာပါ.. ။ ဘယ်လောက်
ကောင်းတဲ့ ဥပမာလဲ..။ မိသားစုဆိုတာလည်း ပြေလည်တဲ့အခါမှာ တစ်မိသားစုလုံးကောင်းစားပြီးအေးအေး
ချမ်းချမ်းနေရပေမယ့်.ကြပ်တည်းတဲ့အခါမှာလည်း ဒုက္ခပေါင်းစုံကို အားလုံးကတက်ညီလက်ညီခံစားကြရ
ကဗျာတွေကိုလေ့လာတာနဲ့အမျှ .. ကဗျာတွေကို ခံစားတတ်လာပါလိမ့်မယ်.။ အချုပ်ဆိုရရင်
တော့ မဝေးသော်လည်း မနီးလှတဲ့စာပေခရီးထဲ..မှာ ကဗျာ..ပိုင်း၊ စာပိုင်း တွေကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့်အမျိုး
သားစာပေတစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းရာရောက်မယ်ဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်.။ မြန်မာစာသည် ငါတို့ပြည်၊မြန်မာ
စာသည် ငါတို့စာ၊မြန်မာစကားသည် ငါတို့စကား ဆိုတဲ့စကားထဲကလိုပါပဲ.။ မြန်မာစာပေနဲ့. မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု
ကိုခွဲခြားလို့မရနိုင်သလို.. ကမ္ဘာ့အခက်ခဲဆုံးဘာသာစကားတွေထဲမှာတစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာစာမြန်မာ
စကားကိုလည်း ထိန်းသိမ်းသွားကြဖို့ဆိုတာ.. အားလုံးရဲ့ရင်ထဲက ဆန္ဒ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်..။
Posted by မိုးသက် at 6:38 AM4comments Read more
Posted by မိုးသက် at 10:33 AM6comments Read more
စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာ စိတ်မှာ ရဲရင့်
စစ်ချီ စစ်ထိုး ရှေးရိုးပညာ
ခေတ်သစ်ပေါင်းဖက် တိုးတက်တဲ့ စစ်ဗျူဟာ
စာပေပညာ ခေတ်မီစွာ သင်ကြား
စစ်မြေမှာ ရဲရင့်ပါလို့လေး ။
သန်မာမှုပြ ကာယအား ဖွံ့ဖြိုးရန်ပင်
ထိုင်ထ ဖားခုန် လေထီးခုန်
ရှေ့ကြည့် ဘယ်ညာ သတိ သက်သာ
ဒီကဗျာလေးကိုတော့ ၂၀၀၉ ခုနှစ် စစ်တက္ကသိုလ်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာရေးသားပြီး မဂ္ဂဇင်းစာမူအဖြစ်
ရွေးချယ်ခံရတဲ့ကဗျာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်..။ တျာချင်းကဗျာအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး.. အွန်လိုင်းပေါ်ကို.. ၂၀၁၀ ခုနှစ်
မှာ အပတ်စဉ် ၄၃ မှ နောင်တော်များရဲ့ ၄၃ယောက်မြောက် အမေ့သားများဘလော့မှာ..ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်.။ အဲ
ဒီဘလော့မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့နာမည်အရင်း. ဟိန်းလင်းထွန်း ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ဖော်ပြခဲ့တာပါ.။(စာမူတင်တုန်းက
တော့ မုတ်သုံ(ပြင်ဦးလွင်)နဲ့ တင်တာပါ..။ ဘယ့်နှယ့်ကြောင့် ဟိန်းလင်းထွန်းပြန်ဖြစ်သွားလဲမသိပါဘူး...)
မူရင်းကဗျာလေးကိုကြည့်ချင်ရင်ဒီ နေရာမှာကြည့်လို့ရပါတယ်.။(မူရင်းကဗျာမှာ ဗိုလ်လောင်းဘ၀ တက်
ရောက်ကြသောခါ ဖြစ်နေတယ်.။ တကယ်တမ်းက ကျွန်တော်ရေးထားတာ တက်မပါပါဘူး..။ ကွန်ပျူတာ
စာရိုက်တဲ့ ဆရာသမားက ကွန့်လိုက်တယ်ထင်ပါ့.။)
ကဗျာတွေကိုရေးသားတဲ့အခါ.. တစ်ခါတစ်ခါ ကာရံနောက်ကိုလိုက်လွန်းရင်လည်းအရေးအသားက
မလှတော့ဘူး.။တစ်ခါ ဇာတ်လမ်းနောက်ကိုလိုက်လွန်းရင်လည်း.. ကာရံက သိပ်ရှာရခက်တယ်.။ဥပမာပြော
ရမယ်ဆိုရင်. ကျွန်တော် ဒုတိယနှစ်လောက် ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ပေါ့..။နာမည်က စိတ်လေခြင်းတဲ့...။
ကင်းမဲ့အာရုံ ၊ စိတ်အစုံသည်
ရှေ့ခုံစွန်းကျော် ၊ နာရီပေါ်သို့
လှမ်းမျှော်ကာကြည့် ၊ စိတ်ပျက်မိသည်..။
အောက်မှာကျန်သေးတယ်. သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး. ။ အဲဒီတုန်းကစာမေးပွဲပြီးခါစ..။ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ
စာမေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လည်း Time Table အရ Study ထိုင်ရတော့. ။ စိတ်လေနေတဲ့အကြောင်းကိုထိုင်ရေးထား
နောက်ထပ် လက်တန်းရေးတဲ့ကဗျာလေးတွေရှိသေးတယ်..။ ပထမနှစ်တုန်းက ကျွန်တော့်ကိုချစ်တဲ့
စီနီယာအစ်ကိုတွေက အခန်းကိုခေါ်ပြီး..လုပ်ပါဦးကွ တစ်ပုဒ်လောက်ဆိုရင်. ။ ပါးစပ်ထဲတွေ့တာတွေရွတ်ပြရ
တာတွေရှိပါသေးတယ်။ တစ်ခေါက်က.. တပ်စု အကြပ်ကြီးတာဝန်ကျတဲ့ ကိုစောသီဟက.. ညီလေး အစ်ကို့
အကြောင်းကို ကဗျာတစ်ပုဒ်လောက်လုပ်ပါဦးကွာ. ဆိုတော့. ကျွန်တော့်ပါးစပ်က မရှေးမနှောင်းထွက်သွား
ယခင်က အကြပ်ကြီး ၊ စက်ကြီးကိုသူကိုင်
အခန်း(၁) ညာဘက်စွန်းမှာ ၊ထောင့်ကပ်ကာထိုင်
ယခုတော့ မှိုင် ၊ စလွယ်နီ လက်ကကိုင်ပြီး
ဆိုတော့.. ။ ဆရာသမားက ကျွန်တော့်ကဗျာလေးကိုကူးသွားတယ်.။ကဗျာကအရေးများလေလေ
ကဗျာဥာဏ်က ထွက်လေလေ .. ၊လျင်မြန်လာလေပါပဲ..။လက်တန်းစပ်ဆိုတယ်ဆိုတာ အရေးများလာလို့ပါ.။
ချပ်ဝတ်တွေအစုံလင်နဲ့ ၊ မျက်စိကကြောင်
ရွှေလရောင် ၊ ၀င်းပြောင်လို့ထိန်လင်း
အပေါ်က ကောင်လေးတွေက သံပေါက် သဘောမျိုးပါ.. ။ဘာညာဗျာ စုံစိနေတာပါပဲ..။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်
ကဗျာတွေက အပြင်မဂ္ဂဇင်းမှာကျတော့သိပ်မတိုးနိုင်တော့ဘူး.။ ခုခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲကို တိုးဝင်ဖို့ခက်
သွားပြီ..။ ဒါပေမယ့် ဆောင်းပါးတို့ ၀တ္ထုတို့တော့ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်.။ ကဗျာကိုတော့ စစ်တက္ကသိုလ်မဂ္ဂဇင်း
မှာ နှစ်တိုင်းပါခဲ့ပါတယ်.။မြန်မာစာဌာနကကျွန်တော့်ဆရာတွေရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးတွေ လေ့လာရအောင်
ထိုးထားကွ . . . ထိုးထား
ပြေးထားကွ . . . ပြေးထား
လွှဲထားကွ . . . လွှဲထား
ပစ်ထားကွ . . . ပစ်ထား
ရှင်းထားကွ . . . ရှင်းထား
ကျက်ထားကွ . . . ကျက်ထား
ထိန်းထားကွ . . . ထိန်းထား
ကြိုးစားကွ . . . ကြိုးစား
ပျော်စရာ နောင်တစ်နှစ်ဆီ အမှန်ပ
မာန်တကြွကြွ သူများရှေ့ နေရမည်မို့
ဗိုလ်ကြီး အောင်မျိုးနိုင်၊ အပတ်စဉ် ၄၃
( ၂၀၀၉ ခုနှစ် စစ်တက္ကသိုလ် နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်း )
သိပ်ကိုကောင်းတဲ့ကဗျာလေးပါ.. ။ ကျွန်တော်နဲ့ သူနဲ့ စာမသင်ဖူးပါဘူး.။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ မြင်ဆရာ
မြတ်စွ ကျေးဇူး ဂုဏ်အထူးကို
နောက်သို့ မဆုတ်လေပြီတည်း။ ။
ဗိုလ်လောင်း နေထွဋ်အောင်၊ အနော်ရထာ/၁၂၊ အပတ်စဉ် ၅၃
( ၂၀၀၉ ခုနှစ် စစ်တက္ကသိုလ် နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်း ) သိပ်ကို သဘောကျတဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ရှိသေးတယ်..။ လေးချိုးအမျိုးအစားပါ.. ကာရန်ယူရတာ သိပ်ခေါင်းစား
တကယ်အတည်လွမ်းပါဘိ ချယ်ရီနန်းက တက္ကသိုလ်…
စီနီယာ တွေကြောင့် ဖြောင့်မတ်
ထလျက်သာ ဖိနပ်ပဲ တိုက်ခဲ့ရတာတွေ မှတ်မိပါသေး။
ကြက်ဥနဲ့ အမဲသားတွေကိုလည်း မှတ်မိပါသေး။
နေကြာရိုင်း ပေါက်ခဲ့တာတွေလည်း မှတ်မိပါသေး။
. . . မှတ်မိပါသေး။
တကယ်အတည် လွမ်းပါဘိ ချယ်ရီနန်းက တက္ကသိုလ်
ဥသြ ( ချယ်ရီမြေ )
အောင်မျိုးနိုင်( အောင်ဆန်း )
၂၀၀၈ နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်း တကယ်တမ်းက လေးချိုးကဗျာတွေဆိုတာ ခုခေတ်မှာရေးစပ်သူ မရှိသလောက်နည်းပါးသွားပြီဖြစ်ပါ
တယ် .။မပျောက်ပျက်အောင်ထိန်းသ်ိမ်းဖို့လိုပါတယ်.။ ကျွန်တော်တို့ မှာ တင်မဟုတ်ပဲ..စာပေအသိုင်းအ၀ိုင်း
က လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ထင်ပါတယ်.။စစ်သားဖြစ်နေပေမယ့်. လက်ရုံးရည်ရော နှလုံးရည်ပါပြည့်ဝမှ
ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသပါတယ်..။ Be Physically and Mentally fit ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ် လည်းရှိပါတယ်.။
လက်ရုံးရည်သက်သက်နဲ့ ခေါင်းဆောင်လုပ်ရင်.. လက်အောက်ငယ်သားကို ရင်ဝယ်သားပမာ အုပ်ချုပ်မှုအား
နည်း ပါတယ်.။ကဲထားပါတော့.. ကဗျာဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြဦးစို့...။ကိုအလင်းသစ်ပြောသလိုပါပဲ . ကျွန်တော်
လည်း ဒီဘလော့မှာ တစ်ခြားအကြောင်းတွေ မရေးချင်ပါဘူး.။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ သမိုင်းစာ
အုပ် ပါးပါးလေးတစ်အုပ်လုံးနဲ့.စာပေခရီးလမ်းတစ်လျှောက်လုံးက.. စိန်ပန်းပြာတက္ကသိုလ်မှာအများဆုံး ဖွဲ့
Posted by မိုးသက် at 12:40 PM9comments Read more
စာပေခရီးနီးသလား.. လို့ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်တော့ စာပေ ပါရဂူကြီးစတိုင်ဖြစ်သွားမလားမသိဘူး.။ ဟဲဟဲဘယ်နေရာမဆို ခပ်ပါးပါးလောက်ပဲသိတဲ့ တောင်စပ်စပ်မြောက်စပ်စပ်တွေထဲက စာစပ်စပ်လေး
တွေနဲ့ ပတ်သတ်ခဲ့မှုလေးတွေကို စကားစမြည်သဘောမျိုးလေးပြောပြချင်လို့ပါ..။
ကဗျာတဲ့..။ ဘာလဲကဗျာ.။ ဆယ်တန်းတုန်းကတော့မြန်မာစကားပြေစာအုပ်ထဲက.ဆရာကြီးဦးဖေမောင်
တင်ရဲ့ မြန်မာစာအရေးအသားတိုးတက်စေနည်းထဲမှာ ပါတဲ့ ခက်ဆစ်တစ်ခုကိုကျက်ခဲ့ရတယ်.။ကဗျာ. စာလုံး
အကန့်အသတ်၊ကာရန်အချိတ်အဆက် တို့ဖြင့်စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားသော ပုဒ်အစုအပေါင်းကို ကဗျာဟုခေါ်
သည် တဲ့.(အတိအကျတော့ဟုတ်လောက်ဖူးအသက်ကြီးပြီဆိုတော့ မေ့ပြီဗျာဒါပေမယ့် အဲဒါနဲ့နီးစပ်ပါတယ်)
ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဆိုတာက မြန်မာ့စာပေလောကမှာ တော်တော်ကို ကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ခဲ့
တဲ့သူဆိုတာ ပြောစရာမလိုဘူး.။မြန်မာစာ လောကမှာ ဆရာကြီးတီထွင်ခဲ့တဲ့စကားလုံး တွေအများကြီးပါပဲ.။
ဥပမာပြောရရင်ခုခေတ်တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ဆရာကြီးထွင်ခဲ့တာပါတဲ့.။Taxila (အတတ်ပညာပေါင်း
စုံသင်ကြားနိုင်သော တက္ကသိုလ်ပြည်ကနေ နာမည်ယူထားတာ)ဆိုတဲ့စကားလုံးကို မြန်မာ့ပညာရေးဝန်ကြီး
အင်္ဂလိပ်လူမျိုးနဲ့ညှိပြီးသတ်မှတ်ခဲ့တာပါတဲ့.။နောက်ပြီး ဆရာကြီးက ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမယ့် ဓမ္မပဒ
ကို မြန်မာလိုဘာသာပြန်ပေးခဲ့ပါသတဲ့.။ အော်..ပြောရင်းနဲ့စကားလမ်းကြောင်းတွေကလွဲကုန်ပြန်ပါပြီ..။ပြော
ချင်တာက ကဗျာ အကြောင်း..။
ဘလော့ဂါ အတော်များများက ကဗျာရေးဖူးကြတယ်.။ကဗျာ ဆိုတာ အမျိုးမျိုးသောကဗျာတွေပေါ့ဗျာ.။
ရှေးပုံစံ တျာချင်း၊အိုင်ချင်း.၊ လေးချိုး ၊ ဒွေးချိုး ပုံစံအနည်းစုနဲ့မော်ဒန်ကဗျာတွေ ကိုလည်းရေးကြပါတယ်.။
ဒါပေမယ့် ရှေးပုံစံကတော့အနည်းစုပေါ့...။အဲဒီတော့ နောက်ပိုင်းရေးတဲ့ကဗျာများထဲက မော်ဒန်ကဗျာကိုပိုရေး
တာများပါတယ်.။ ဒီမော်ဒန်ကဗျာတွေကို တစ်ချို့လူတွေကလက်မခံကြဘူး.။ ဒါပေမယ့် မော်ဒန်ကဗျာတစ်ပုဒ်
ဖြစ်လာဖို့ . ဘယ်လောက် နက်တဲ့စာသားတွေ ပါသလဲ ဆိုတာ ခံစားတတ်တဲ့သူကပဲသိပါတယ်.။ထားပါတော့
လေ.။ကျွန်တော်နဲ့ အဲဒီကဗျာ တွေနဲ့ ဘယ်လို သိကျွမ်းခဲ့သလဲ ဆိုတာကို စပြီးမိတ်ဆက်ပါ့မယ်.။
ကျွန်တော်ပထမဆုံးစရေးတဲ့ကဗျာလေးက.. ပန်းတိုင်ဆိုတဲ့ကဗျာလေးပါ..။၈ တန်းနှစ်က ထင်ပါတယ်.။
ဘာညာပေါ့ဗျာ..။ တကယ်တမ်းက ကျွန်တော်အဲဒီအချိန်မှာ ကဗျာကိုဘယ်လိုရေးရမယ်.။ဘယ်လိုကာရန်
တွေသုံးရမယ်.. ဘာညာဆိုတာ လုံးဝမသိသေးဘူး.။ကဗျာတွေအဖတ်နာထားတဲ့အတွက် နည်းနည်း အံဝင်
နေတာ.။ ဒါပေမယ့် .ဒုတိယအပိုဒ်အစက ကို နဲ့ ချို နဲ့က မူရင်းရေးထုံးနဲ့လွဲနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်.။အဲဒီအ
ချိန်မှာ အိမ်ကအဖေက အမေ့ကိုပေးဖူးတဲ့ကဗျာလေးကိုဖတ်မိတယ်.။ (ပြန်မပြောနဲ့နော်..)
ချစ် ခြင်း မေတ္တာ
လှမ်းမ ဝေး အောင်
လွမ်း တေးသစ္စာဆိုနေမယ်..။ တဲ့.
ကြည့်စမ်း လှလိုက်တာ.။ သိပ်ကိုသဘောကျသွားတယ်.။ ၈ တန်းပြီးတော့ ကိုးတန်းတက်မယ့်အချိန်မှာ ကိုး
တန်းကိုနွေရာသီကျူရှင်ယူတယ်.။ အဲဒီမှာ မြန်မာစာဆရာမက Course အစောကြီးပြီးသွားလို့ ကျွန်တော်က
ကဗျာရေးသင်ခိုင်းတယ် .။ ဆရာမက ကျွန်တော်တို့ကိုစနစ်တကျ ပြန်သင်ပေးပါတယ်.။Example လေးတွေ
နဲ့ပေါ့.။၄-၃-၁ ကာရန်နဲ့ ၄-၃-၂ ကာရန် ဆိုပြီး ၂ မျိုးရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ ၄-၃-၂ က ပိုပြီးတော့ ဖတ်ရတာ ချောတဲ့
အတွက် အရေးများကြောင်းရှင်းပြတယ်.။၄-၃-၂ ဆိုတာက.. ပထမပါဒရဲ့ ၄ လုံးမြောက် စာလုံး ၊ ဒုတိယ ပါဒရဲ့
၃ လုံးမြောက်စာလုံးနဲ့. တတိယပါဒရဲ့.. ၂လုံးမြောက်စာလုံးတို့ ကာရန်ထပ်တာကိုဆိုလိုတာပါ.။ ဥပမာပြောရ
တို့ရွာက လေး၊လရောင် ဖွေး
ငါတို့ဆရာမ၊ ပညာ ပြ
(တတိယပိုဒ်မှာ ဆရာ ဆိုတာကိုတစ်လုံးတည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်.။)
ထပ်ပြီးတော့. အလုံးများကိုထပ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့် ကဗျာပိုဒ်တွေဖြစ်လာပါတယ်.။ ကျွန်တော်ပါဒတွေထပ်တိုး
မောဟိုက်ပင်ပန်း ၊ကိုယ်စိတ် နွမ်းသည့်
ကင်းကျ သောည ၊လွမ်းခဲ့ရသည်.။
ဖတ်တဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဒီလိုပုံစံမြင်ဖူးတယ် လို့ ထင်နေပါလိမ့်မယ်.။ ဒီပုံစံကတော့ခေတ်
စမ်းလင်္ကာတွေမှာအရေးများတဲ့. လေးလုံးစပ်ကဗျာလို့ခေါ်ပါတယ်.။ ဖတ်ရတာ အင်မတန်သွက်ပါတယ်..
ကိုယ့်ဖာသာ စမ်းရေးလို့သိပ်ကောင်းပါတယ်..။ ကျွန်တော်အများဆုံးရေးခဲ့တာလဲ ဒီလို ကဗျာလေးတွေပါပဲ.။
ဒီကဗျာတွေရဲ့နောက်မှာ..နောက်ထပ် စွန့်ဦး တီထွင်မှုတွေထွက်လာတယ်..။ အဲဒါက ပန့်ခ်ကဗျာလို့ပြောရမယ်
ထင်တယ်.။ လေးလုံးစပ်တွေကို ခေတ်နဲ့ အညီ မြှင့်တင်လိုက်တာပါ.။စကားလုံးအကန့်အသတ် Lawတစ်ခု
လေလွင့်အာရုံ ၊ စိတ်အစုံတွင်
ကြေကွဲဆို့နင့် ၊ သက်မကိုပင့်လို့
ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်.။ ကာရန်မမိဘူးလားဆိုတော့ မိတယ်..။ဒါပေမယ့် စကားလုံးကန့်သတ်ချက်ဆိုတဲ့
Rule ကိုဖယ်ပြီးရေးလိုက်တဲ့အတွက်. စည်းချက် နဲ့ဆိုရမယ့် ဘောင်ထဲကလွတ်ထွက်သွားတယ်.။ ပေါ့ပါးပြီး
ခံစားချက်ကို တိုက်ရိုက်ထိတယ်.။ ဟိုတစ်လောက အစ်ကို အလင်းသစ် ရေးထားတဲ့ ရေသေအိုင် က အဲဒီလို
ကျွန်တော်ဆယ်တန်းနှစ်မှာ အိမ်ကို စာရေးတယ်.. ။ လေးချိုးကဗျာတစ်ပုဒ်ပေ့ါ.။စမ်းရေးကြည့်တာပါ.။
မှတ်တော့ ကောင်းကောင်းမမှတ်မိတော့ဘူး.။ နောက်ပိုင်းမှသိရတာ ကျွန်တော်ရေးတာ အမှားတွေသိပ်များ
နေတယ်.။ ပထမနှစ်မှာ နံရံကပ်စာစောင် ပြိုင်ပွဲဝင်တယ်.။ ကျွန်တော်ပိုဒ်စုံရတု ရေးတယ်.။ နာမည်က
လျှံစည်ဘုန်းမော်၊တို့ကျောင်းတော် ခေတ်သစ်ရတု ဆိုတဲ့နာမည်ပါ.။ ရတု ကဘာကွာလဲ ဆိုတော့.. ဘွဲ့ကို
ရည်ညွှန်းရတာဖြစ်တယ်.။ ဘုန်းတော်ဘွဲ့ ၊နွေဘွဲ့ ၊ မိုးဘွဲ့ ၊ တောတောင်ဘွဲ့ပေါ့ဗျာ. ။သူ့ရဲ့အရည်အချင်းကို
ပေါ်အောင်ရေးသားရတာဖြစ်ပါတယ်.။ ရတုမှာ သုံးပိုဒ်နဲ့ အထက်ရတုကို ပိုဒ်စုံရတုလို့ခေါ်ပါတယ်.။ သုံးပိုဒ်စ
လုံးရဲ့ ပထမဆုံး ပါဒတွေညီရင် အချီညီလို့ခေါ်ပါတယ်.၊ပါဒအရေအတွက်တွေတူရင်လည်းပါဒညီလို့ခေါ်ပါ
တယ်.။ နောက်ဆုံးပါဒတွေ ညီရင်လည်း. အချညီ လို့ခေါ်ပါတယ်.။ ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ ပိုဒ်စုံရတုမှာ..
လျှံစည်ဘုန်းမော် ၊....၊ပုဂံပြည်လုံးကျော် ၊ ....၊ ၊ ကြံစည်ဦးနော်..၊.. ၊ မှန်တည်ကုန်းတော်၊ ... အစရှိတဲ့
အချီပိုဒ်တွေညီပါတယ်..။ ၁၃ပါဒစီ ပါဝင်တာလည်း တူညီခဲ့ပါတယ်.။ တန်ဆောင်ထီးထီးပေါက်စေသော်.၊..။
အရောင်ညီးညီးတောက်စေသော်.၊ အမှောင်ပြီးစီးပျောက်စေသော်.. ဆိုတဲ့ အချပိုဒ်တွေလည်းညီပါတယ်..။
အချီညီ ၊ အချညီ ၊ပါဒညီ ပိုဒ်စုံရတု လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်.။ ဒါပေမယ့် ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျပြီး.. ပထမနှစ်က ရေးခဲ့
တဲ့ပိုဒ်စုံရတုလေးက.. နံရံကပ်စာစောင်တွေထဲကနေ ပစ်လိုက်တဲ့စာရွက်တွေထဲ ပါသွားတာလား..ဘာလား
မသိရပဲ.. ။ ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်သွားပါတယ်.။
လျှံစည်ဘုန်းမော် ၊ သောင်းထိပ်ကျော်၍ ၊ကျောင်းတော်ဂုဏ်မြင့် ၊သရေတင့်စေ. ၊ .. ဘာညာ.(မှတ်မိတော့ဘူး
ဗျာ.. ရေးတာတွေက များတော့ ရှုပ်ကုန်ပြီ..)ဒုတိယနှစ်မှာ ရေးတဲ့ကဗျာက.. စစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းမဂ္ဂဇင်း
မှာပါခဲ့ပါတယ်.။ ဗိုလ်လောင်းဘ၀ရောက်ကြသောခါ တျာချင်းပါ..။ သူက ညောင်ရမ်းခေတ်စတိုင်ပါ..။ကျွန်
တော်တို့ဝန်ကြီးပဒေသရာဇာ ရေးခဲ့တဲ့. နွေဦးကာလ ၊မြူထသောခါ တို့.၊ ၀ဿန်ကာလ ၊ မိုးကျတည့်လျှင်တို့
လိုမျိုးပါပဲ.။ အဲဒီအခါမှာ..ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံဖြစ်ခဲ့ပုံလေးကို ပြောပြပါ့မယ်။
အဲဒီကဗျာရေးတုန်းက ကျွန်တော် ကာရန်ရှာမရတဲ့နေရာတစ်ခုကို ကျွန်တော့် ဖွက်ထားတယ်.။အလွယ်တကူ
မသိနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုပေါ့ဗျာ.။ အဲဒါကျွန်တော်တို့အနော်ရထာတပ်ရင်း ဘုတ်မှာကပ်ထားတဲ့အခါ.. ။ အောင်
ဇေယျဖက်က ကျွန်တော်တို့ အပတ်စဉ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က လာဖတ်နေရင်းချက်ချင်းပဲ.။ မိုးသက် မင်း
ကဗျာက ဒီနားလေး လွဲနေတယ်ထင်တယ်ကွ...တဲ့.။ကျွန်တော့်ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အပတ်စဉ်ကလူတော်
တော်များများသိကြပါတယ်.။ ကျပန်းစကားပြောပွဲတွေမှာ ကျွန်တော်တက်တိုင်း ပွဲဆူအောင်ပွဲကျအောင်လုပ်
လေ့ရှိလို့ပါ..။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော် နဲနဲ တင်းသွားတယ်..။ ဒီကောင်ကဘာလဲပေါ့..။ အသက်ကလည်းငယ်သေး
တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သွေးနားထင်ရောက်နေတာလဲပါမှာပေ့ါဗျာ.။ ကျွန်တော်မျက်နှာပျက်သွားတာကိုတွေ့
တော့ သူက . အော်သူငယ်ချင်း.. မင်းလည်း ငါ့ကဗျာကို လာအားပေးပါဦး ဆိုပြီး သူတို့အောင်ဇေယျတပ်ရင်း
ရဲ့ ဘုတ်ကို ခေါ်သွားတယ်.။သူရေးထားတဲ့ကဗျာကို ပြတယ်.။ လားလား.. ဆရာသမားက ရေးထားတာ
ကာချင်း ကဗျာဗျာ..။ လူတော်တော် ကျွတ်သွားတယ်.။စကားလုံးတွေသုံးထားတာ တကယ်ဗျာ.။ လက်လန်
တယ်.။ ကျွန်တော်သူ့ကိုတစ်အံ့တစ်သြပြန်မေးရတယ်.။ မင်းအပြင်မှာရေးဖူးသလားဆိုတော့ သူက နိုင်ငံဂုဏ်
ရည်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ရွှေတံဆိပ်ဆုရှင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း. ပြောမှ လေးစားစွာ နှုတ်ဆက်မိပါတယ်.။ ကျွန်တော်
လည်းသူ့ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝန်ခံတာပေါ့.။ကျွန်တော်က ဘော်လန်တီယာ ရေးတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အကြောင်း
နဲ့ သူ့ကို အင်မတန်လေးစားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း..။
နောက်တော့ သူနဲ့ပြိုင်ဘက်တွေလို ဖြစ်လာတယ်.။ ဒါပေမယ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတော့ သူ့ကို အတော်ကို
လေးစားပါတယ်. ။ သူက ကဗျာအမျိုးအစားတော်တော်များများကိုရေးတတ်ပါတယ်.။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်
က မဂ္ဂဇင်းမှာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထပ်ပါသေးတာနဲ့.. ကျပန်းစကားပြောနဲ့ စကားရည်လုပွဲအတွက် Editing
လုပ်ပေးတာ အားထည့်လိုက်တာကြောင့်.ကျွန်တော်တို့တပ်ရင်းအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်.။ မနိုင်ရှိရိုးလား. ကာတွန်း
နဲ့ပန်းချီ.ကို ကျော်ဇေယျာလွင်. တို့ ဆရာတစ်စု..၊ကဗျာနဲ့ စာမူတည်းဖြတ်က ကျွန်တော်.. ။ အပြင်အဆင်ပိုင်း
ကို လည်း တပ်ခွဲလိုက်က သပ်ရပ်သူ တွေ ပေါင်းပြီးလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်.။ ကျွန်တော့်အပိုင်းက သိပ်အား
မပါပေမယ့်.။ ပန်းချီမှာ ကျော်ဇေယျာလွင်တို့ရှိတာက ကာတွန်းအမှတ်နဲ့ သရုပ်ဖော်ပန်းချီအမှတ်ကို အပြတ်
အသတ်နဲ့နိုင်ခဲ့တာပါ.။ စကားရည်လုတို့ ကျပန်းတို့ကတော့..တော်တော်ကို အားထည့်လိုက်ရပါတယ်.။
Posted by မိုးသက် at 2:52 PM7comments Read more
စိတ်ထဲမှာတော်တော်ကို မခံစားနိုင်လို့ ရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်..။ ဘယ်သူမှ မရေးသေးဘူးလို့ထင်မိ
ပါတယ်..။ မနေ့က မတ်လ (၁၄) ရက်နေ့ပေါ့..။ သိပ်ကိုထူးခြားတဲ့နေ့ပါ..။ ၀န်ထမ်းတွေ ထောက်ပံ့ကြေးတိုးတဲ့
နေ့၊ ၂သိန်းတန်ဖုန်းတွေချထားပေးတဲ့နေ့ ၊ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားကနေ အန်တီစု စကားပြောတဲ့နေ့.၊ဘင်္ဂလား
ဒေ့ရ်ှနဲ့ မြန်မာရေပိုင်နက် ကိစ္စ အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် နေ့ ...အဲဒီနေ့ မှာ မနက်ခင်းနိုးကတည်းက စိတ်ဝင်စား
နေတာကဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ မြန်မာနဲ့ အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့်ကိစ္စပါ..။၀န်ထမ်းတွေထောက်ပံ့ကြေးတိုးတာ ကိုယ်
မပါပေမယ့်.. မုဒိတာပွားပြီးသွားပြီ.။ ၂ သိန်းတန်ဖုန်းတွေထုတ်ပေးတာလဲ ကြိုသိပြီးသွားပြီ..။ အန်တီစုပြောတဲ့
စကားလည်း Facebook မှာနားထောင်ပြီးသွားပြီ။သိပ်ကိုသိချင်နေတာစိတ်ဝင်စားနေတာစိတ်လှုပ်ရှားနေတာ
ဆိုတော့ အဲဒီ နေရာတွေ အဲဒီ နေရာမှာရှိတဲ့လ်ုကွက်တွေက ကျွန်တော်တို့ဘက်က အစဉ်အဆက်လုပ်လာတဲ့
နေရာတွေဖြစ်လို့ပါ.။ စာသင်ခန်းက ပြ န် လာတော့ ထူးခြားတဲ့နေ့မှာပဲ ထူးခြားစွာ.ပရော်ဖက်ဆာကြီး အတန်း
ကမရှိဘူး.။ အတန်းက ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း.. Facebook ဖွင့်လိုက်တယ်..။ လင့်ခ်တွေပလူပျံနေတယ်..။
ဆဲသံဆိုသံ တွေညံနေတယ်.။ မြန်မာရှုံးသွားပြီတဲ့..။ အံ့သြခြင်းကြီးစွာနဲ့.. လင့်ခ်တစ်ခုကိုဝင်လိုက်တယ်.။
ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ.. မသိတဲ့သူက မသိကြသေးဘူး.။ ပလူပျံနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ဂရုထဲမှာ
ပြောတာပါ.။လင့်ခ်တစ်ခုကိုဝင်လိုက်တယ်..။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသတင်းဌာနရဲ့ သတင်းဆိုက်ပါ...။
ကျွန်တော်ဝင်တဲ့အချိန်မှာ Like လုပ်တဲ့သူ တစ်သိန်းကျော်နေပြီ..။
ရင်နာဖို့ကောင်းတာက အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ရွှေ တွေဖက်က ဘယ်သတင်းဌာနကမှ မတင်သေး
အချင်းချင်း စိတ်ဓါတ်ပြင်းတဲ့သူတွေလောက်ပဲ...လင့်ခ်တွေဝေကြ ဆဲကြဆိုကြ..။နဲ့သိလာတာပါ..။ ကျွန်တော်
ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်ထဲကသူငယ်ချင်း တစ်ဦး.(မြန်မာနိုင်ငံက..) ကိုလှမ်းအကြောင်းကြားတယ်.။ သူငယ်ချင်း
မြန်မာ တွေဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ရှုံးသွားပြီ ဆိုတော့.. သကောင့်သားက ဟေ. ကျော်ကိုကို မပါဘူးလားတဲ့..။
ကျွန်တော် စိတ်တိုပြီး CPUပုံးကို ခြေထောက်နဲ့ ဆောင့် ကန်မိတယ်ဗျာ..။ သူများနိုင်ငံက Like လုပ်တာ
၁၀၀၀၀၀ ကျော်နေတဲ့အချိန်မှာ.. ကျွန်တော်တို့က.. ဘာဆိုဘာမှ မသိကြသေးဘူး.။ (ဒီစာရိုက်နေရင်းနဲ့
တောင်..ကျွန်တော်လက်တွေဆတ်ဆတ် တုန်နေတာ..။စိတ်တိုလွန်းလို့..။ )
ကျွန်တော်ဒီဘလော့ကို တစ်ခြားအကြောင်းမရေးဘူးလို့ ပြောပေမယ့် ဒီကိစ္စကိုတော့.. ကျွန်တော်ဘယ်
လို မှ မခံစားနိုင်လို့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေဆီ ရင်ဖွင့်တာလို့ သဘောထားပေးပါဗျာ.။ ရင်ထဲမှာတကယ်ကို
နာတယ်ဗျာ..။လူမျိုးစွဲ မထားပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ မြေ မိုင်ပေါင်းများစွာ သူတို့လက်ထဲပါသွားတော့
တကယ်ကို မချိဘူးဗျာ.။ ရေနံသိုက်တွေ .၊ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့သိုက်တွေ ပါသွားတယ်.။ တကယ်တမ်းသူတို့
တောင်းဆိုထားတာက ရေမိုင်ပေါင်း ၁၀၇ ၀၀၀ ပဲ တောင်းဆိုထားပေမယ့်.. ။ ကျွန်တော်တို့ တကယ်တမ်း
ပေးလိုက်ရတာက..၁၁၁ ၀၀၀ ရေမိုင်အထိရသွားပါတယ်.။မြန်မာ့ရေမြေကို မတရားသောနည်းနဲ့. ရယူပြီး ၊ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေကိုစော်ကားလိုက်တာပါ..။ မြန်မာ့သမိုင်းမှာဒါဟာအမည်းစက်တစ်စက်ပါပဲ.။
ကျွန်တော် မချင့်မရဲဖြစ်မိတာက.. ဘာဖြစ်လို့များ .မီဒီယာတွေအနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို မဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာလဲ.။
ဘာလို့များ မဖော်ပြခဲ့ကြတာလဲ.။ အပေါ်ကပုံကိုကြည့်လိုက်တိုင်းရင်နာတယ်ဗျာ.. ။သူတို့နိုင်ငံမှာ အောင်ပွဲ
ခံနေမယ်လို့ထင်တယ်.။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ တက်တစ်ခေါက်ခေါက်နဲ့... ငိုတဲ့သူကငိုကြတယ်.။ဒါပေမယ့်
မသိတဲ့သူကလည်း လုံးဝကိုမသိသေးဘူး. အဲဒါတော့ လုံးဝ မဖြစ်သင့်ပါဘူး..။လူမျိုးစွဲ မထားပါဘူး.။လူတိုင်း
ကို မြန်မာနိုင်ငံကနေ မိတ်ဆွေအဖြစ် နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်.။ဒါပေမယ့် မြန်မာ့ရေမြေနဲ့..၊ မြန်မာ့ အမျိုး
သားရေးကို တော့ မထိခိုက် မစော်ကားပါနဲ့..။အဲဒါဆိုရင်တော့ ဘယ်သူ့ကိုမဆိုရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်မှာပါ.။
ကျွန်တော် ဒီပို့စ်လေးကို တဂ်ပို့စ်လေးလုပ်ထားပါတယ်.။ ကျွန်တော့်စိတ်ထင်ဘယ်သူမှ ရေးချင်မယ့်ပုံမပေါ်
ပါဘူး.။ မရေးလည်း ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး..။ကျွန်တော်ကတော့...အရင် မြစ်ဆုံကိစ္စလိုပဲဖ်ာထုတ်သင့်တယ်လို့
ထင်ပါတယ်.။ဖြစ်နိုင်ရင်.. ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ အနေနဲ့ . ဒီကိစ္စလေးအပေါ် အမြင်လေး တွေသိချင်ပါ
တယ်. ။သီးသန့် မတဂ်တော့ဘူးဆိုပေမယ့်..။ အမျိုးသားရေး အတွက် မိမိရင်ထဲမှာ ခံစားရတာလေးတွေရှိ
ရင် သိချင်ပါတယ်.။ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ရဲ့အမြင်က မှားကောင်းမှားနေနိုင်ပါတယ်.။ ဒါပေမယ့်
အားလုံးရဲ့ အမြင်တွေကို..သိရခြင်းအားဖြင့်.. မှန်ကန်တဲ့.. ခံယူချက်တစ်ခုကို ကောက်နှုတ်နိုင်မယ်လို့
အားလုံးကို အလုပ်ပေးတာမဟုတ်ပါ..။ ကျွန်တော်ကတော့. တွေးမိတိုင်းအံကြိတ်မိတုန်းပဲ..။
ကိုအလင်းသစ် ၊ကိုမောင်မောင်(မြစ်ဆုံ)(အစ်ကိုကရေးထားပြီးသားထင်တယ်..)၊ အစ်ကိုရင်ဆူး
အစ်ကိုစိုင်းစိုင်း၊အစ်ကိုလွင်ပြင်လှိုင်းငယ်၊ညီလေး ချော့ကလတ်ကျူးပစ်လေး.၊ညီလေး လက်ဝဲ၊
အစ်ကို.₭Ǿ2၊အစ်ကို မောင်(စွယ်စုံကျမ်း)၊ညီလေး နွေလ၊ညီလေးသီဟလုလင်
အစ်မချစ်စံအိမ်၊အစ်မ Snow May ၊ အစ်မ ဆုမြတ်မိုး၊ အစ်မ ဂျယ်ရီပစ်ပစ်၊အစ်မ မြတ်ပန်းနွယ်၊အစ်မ
အန်တီတင့်ကတော့. လူကြီးဖြစ်နေလို့.. ကျွန်တော် မတောင်းဆိုချင်ပါဘူး.. ။ စိတ်ရှုပ်အောင်လုပ်သလို ဖြစ်
ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိရင်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ.. စိတ်ကတော်တော်ကို တိုနေလို့ပါ..။ကိုယ့်ဖာသာတဂ်
ပြီးရေးပေးကြပါ.။ စိတ်ထဲမှာရှိသလောက်ပေါ့ဗျာ.။ ဒီကောင် ဒုက္ခပေးတယ်ကွာလို့တော့မသတ်မှတ်ပါနဲ့
နော်..။ စိတ်ထဲမှာ မချိလွန်းလို့ပါ..။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်.။
Posted by မိုးသက် at 5:38 PM 13 comments Read more
Posted by မိုးသက် at 9:19 AM7comments Read more
Posted by မိုးသက် at 8:27 AM 11 comments Read more
မအူမလည်တောသားမြို့ရောက် မောင်မိုးသက်တစ်ယောက်. မော်စကိုမှာ ဖုန်းဝယ်တုန်းကပေါ့...။ကြင်
နာသူနဲ့ ဆင်တာယူမယ်ဆိုပြီး.. Sony Ericsson W595 လေးကို မရရတဲ့နေရာကရှာဝယ်..။ဖုန်းကဒ်သွားဝယ်
တော့ ရုရှားငွေနဲ့.. ရူဘယ် ၂၀၀ သာပေးရတယ်.။ မြန်မာငွေနဲ့ တွက်ကြည့်တော့. ၅၀၀၀ ကျော် ၆၀၀၀ နီးပါး
သာကျသင့်မယ်ဆိုတာ တွက်မိတယ်.။ အဲဒီအချိန်ကတည်းက.. အော်သူတို့နိုင်ငံ တိုးတက်လှချည့် ..။ တို့ အမိ
နိုင်ငံမှာလည်း ဒီလိုဖြစ်ရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ ဆိုတာ တွေးမိပါရဲ့..။ ဒါပေမယ့်လည်း. ..အသိဥာဏ်နည်းပါးတဲ့.
တောင်ပေါ်သား..လူအ တစ်ယောက်ဖြစ်လေတော့..ကိုယ်လိုက်မမီတဲ့ နည်းပညာ ဆိုတာကြီးကိုပဲ..လွှဲချပြီး.
အဲဒါကြီး တို့နိုင်ငံမှာ မရှိလို့ နေမှာလို့ တွက်ဆမိပါရဲ့...။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ.. ရွှေပြည်တံခွန်ဆိုတဲ့ မိုးကျရွှေ
ကိုယ်ကြီးတစ်ဦး ပေါ်လာတယ်.။ ၅၀၀၀ တန်ဖုန်းဆိုတဲ့ သတင်း က ထွက်လာတယ်.။ကျွန်တော်တို့ စသိတဲ့အ
ချိန်မှာ နယ်က လူတွေမသိသေးဘူး.။ လှမ်းပြောတဲ့အချိန်မှာ တစ်ချို့ဆို ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး..။လက်ကိုင်ဖုန်း
ဆိုတာကို ကြေးရတတ် လူတန်းစားတစ်ရပ်အတွက် သီးသန့် အသုံးတော်ခံပစ္စည်းတစ်ခု လို့ထင်မှတ်နေကြရ
တဲ့ အခြေအနေပဲရှိသေးတယ်.။ သေချာပြန်တွက်ကြည့်တော့လည်း နိုင်ငံတကာမှာ ဒီဈေးပဲ..။မှတ်မှတ်ရရ
တစ်ချို့ဖုန်းကဒ်တွေဆိုရင်. မြေအောက်ရထား ဘူတာတွေမှာအခမဲ့လိုက်ဝေတယ်.။ ကြော်ငြာတဲ့သဘောပေါ့။
ဒါဟာ တကယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုပါ...။ဘာပဲပြောပြောပါ.. ကျွန်တော့်အနေနဲ့လည်း ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆို
ရင် ကြိုဆိုပါတယ်...။ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံလည်း တိုးတက်မှုရဲ့အသီးအပွင့်ကို သိသာစွာခံစားရတာပေါ့.။
ယခင့်ယခင် ဖုန်းတွေထက်စာရင်. တန်ဖိုး အတော်ကိုနည်းသွားပါတယ်. ။ဒါပေမယ့်နိုင်ငံတကာဈေးနှုန်းနဲ့
ယှဉ်ထိုးကြည့်ရင် မြင့်နေတုန်းပဲ..။ဒါပေမယ့် မကြာခင်မှာပဲ..အားလုံးရဲ့ ဆန္ဒတွေအကောင်အထည်ပေါ်လာ
၂။ ငါးထောင်တန်ဖုန်းပေါ်လာစေဖို. စတေကာကပ်ခြင်း နဲ. တီရှပ်များ ပြုလုပ်ခြင်းအပေါ် သင်ဘယ်လိုမြင်မိပါ
စည်းစနစ်ကျစွာနဲ့..အေးချမ်းစွာတောင်းဆိုတာဟာ အားလုံးရဲ့အမြင်မှာ သင့်တင့်ကောင်းမွန်ပါတယ်.။
၃။ ငါးထောင်တန်ဖုန်းပေါ်လာဖို. စုပေါင်းလက်မှတ်ထိုးပြီး လွှတ်တော်ကိုတင်ပြခြင်းအပေါ် သင်ဘယ်လိုမြင်မိ
ကောင်းပါတယ် .. ။ ဘယ်ကိစ္စကိုမဆို . ဥပဒေဘောင်အတွင်းက သက်ဆိုင်ရာကိုတင်ပြတောင်းဆိုတဲ့အ
အလေ့အကျင့်ကို အင်မတန်သဘောကျပါတယ်.။ အဲဒီထက် သပ်ရပ်စနစ်ကျ ထိရောက်မှုရှိတဲ့ နည်းလမ်း
မရှိနိုင်ပါဘူး..။ ဘာပဲလုပ်လုပ် ဘောင်ထဲကလုပ်..။
အခြေခံလူတန်းစားပါ သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည့်အတွက်..ကြိုဆိုပါသည်. ။ တကယ်သာဖြစ်လာမည်ဆိုပါက
အစ်မ အိန်ဂျယ်နဲ့ ကိုအလင်းသစ်တို့ တဂ်ထားတဲ့ပို့စ်ဖြစ်ပါတယ်.။ မောင်မိုးသက်တစ်ယောက်လည်း
ထိုကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်.။တစ်ခု ဖြစ်သင့်တာက.. ဖုန်းဆိုလျှင်လည်းတစ်မျိုးတည်း..။ တစ်တန်းစား
တည်းဖြစ်သင့် ပါတယ်.။ ဒီမှာကြည့်ရင်. သမ္မတ လည်း ဒီ ၂၀၀ တန်ဖုန်းကဒ်ပဲကိုင်ပါတယ်.။စားသောက်ဆိုင်
ကအလုပ်သမားလည်း ဒီ ၂၀၀ တန်ဖုန်းကဒ်ပဲကိုင်ပါတယ်.။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလို ၁၆ သိန်းတန်က တစ်စား.၊
၅ သိန်းကတစ်စား.မဖြစ်သင့်ဘူးထင်တာပါပဲ.။ဒါပေမယ့်. ၁၆သိန်း၅သောင်းဖုန်းဝယ်ထားတဲ့သူတွေက မုဒိ
တာမပွားပဲ. တို့ကတော့ ရှုံးပြီးရင်ရှုံးရင်းပဲလုပ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်.။ တကယ်တမ်းဆို ကြိုဆိုရမှာပါ.။တစ်ခု
တော့ တွေးရပါလိမ့်မယ်. ။ သိပ်မလောပါနဲ့.. ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားနေပါတယ်.။ အချိန်တန်ရင် ရောက်မှာပါ.။
အခု ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက တစ်ခုပြီးတစ်ခု တိုးတက်လာနေပါပြီ.။ အဲဒီသတင်းတွေကြားလေ ကျွန်တော်က
တော့ မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းလေပဲ...။ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မဆိုင်တာတစ်ခုပြောပါ့မယ်.။ နိုင်ငံတော်ကိုချစ်တဲ့သူမှန်သမျှ
ကို. ၊နိုင်ငံတော်ကို တိုးတက်အောင်လုပ်မယ့်သူ မှန်သမျှကို ကျွန်တော်ကြိုဆိုပါတယ်.။ မောင်မိုးသက်မှာ
ပုဂ္ဂိုလ်စွဲမထားပါ.။ Facebook မှာ ကျွန်တော်တို့ဂရုလေးတစ်ခုရှိပါတယ်.။ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြား
လွှမ်းမိုးမှုအန္တရယ် စောင့်ကြည့်ကာကွယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်.။ ကျွန်တော်တို့ အပါအ၀င် . တစ်ခြားအရပ်သား
နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်းစုံကလူတွေပါပါတယ်..။ အားလုံးက သူ့အမြင်ကိုယ့်အမြင်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြ
တယ်.။ တစ်ခြားဖိုရမ်တွေ ဘလော့တွေလို ရိုင်းပြစွာမပြောကြဘူး.။ အလွန်အကျွံမငြင်းကြဘူး.။ သူ့ဖက်ကိုယ့်
ဖက် လိုအပ်ချက်တွေ မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်သင့်တာတွေကိုထောက် ပြကြတယ်.။ အားလုံးက အမြင်မတူ
ကြလို့ ၀ါဒတွေကွဲပြားကောင်းကွဲပြားနေနိုင်ပါတယ်.။ ဒါပေမယ့် အားလုံးရဲ့ မိခင်က မြန်မာပြည်ပါ.။ အားလုံး
ကလည်း မြန်မာပြည်ကိုချစ်မြတ်နိုးကြသူတွေပါ.။ ဒီအတွက်. ကျွန်တော်တို့ ဂရုလေးက..သိပ်ကိုပျော်စရာ
ကောင်းပါတယ်.။ ပွင့်လင်းစွာပြောကြသလို.. ငြိမ်းချမ်းစွာပဲဆွေးနွေးကြပါတယ်.။ တကယ်ဖြစ်သင့်တဲ့ အနေ
အထားတစ်ခုကို ဂရုတည်ထောင်သူ က သေချာဖန်တီးထားတာပါ.။ စည်းကမ်းမညီတဲ့ မန်ဘာကို ဘန်းပါ
တယ်.။ သိပ်ကိုကောင်းတာပေါ့.။ ကျွန်တော်တို့ လို တပ်မတော်သားတွေပါသလို.. တစ်ခြားပါတီပေါင်းစုံက
လူတွေကလည်း သူ့အမြင်ကိုယ့်အမြင်ကို ပြောကြပါတယ်.။ အားလုံးက နီးကပ်သည်ထက် နီးကပ်လာတယ်.။
အမြင်တွေလည်း ရှင်းလင်းသည်ထက်ရှင်းလင်းလာတယ်.။ ယုံကြည်မှုတွေရှိသထက်ရှိလာတယ်.။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး
ရင်းနှီးမှုတွေကနေ. တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အထင်အမြင်လွဲမှားမှုတွေ နည်းပါးလာတယ်.။ အဲဒါက ဖြစ်သင့်တဲ့ ရလဒ်
ကောင်းတစ်ခုပါ.။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အကန့်တွေခွဲထားပါတယ်.။ ဒီဘက်ဘလော့မှာ အဲဒီအကြောင်းပြော
တာ ပထမဆုံးအကြိမ်ပါ...။ ဟိုဘက်ကကိစ္စတွေကို ဟိုဘက်မှာပဲထားပါတယ်.။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကိုလည်းစံပြ
ဖြစ်အောင်နေတဲ့အတွက်.. ကျွန်တော် ဘယ်သူ့ကိုမဆို ကောင်းမွန်စွာရှင်းပြနိုင်ပါတယ.်။
ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်.. ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ငါးထောင်တန်ဖုန်းကဒ် ထွက်ပေါ်လာမည့်အပေါ် လှိုက်လှိုက်လဲ
လဲ ကြိုဆိုပါတယ်.။ဖြစ်သင့်တယ်လို့ယူဆပါတယ်.။တိုင်းပြည်ကို တိုးတက်အောင်.၊ ပြည်သူတွေအဆင်ပြေ
အောင်.၊ ဘ၀တွေသာယာအောင်လုပ်မယ့်သူ..မှန်သမျှကို ကျွန်တော် မောင်မိုးသက်က.ရင်မှဖြစ်သောပီတိ
Posted by မိုးသက် at 1:11 PM9comments Read more